Akụkọ - Mmadu ole ka imara banyere ihe osise iri kacha ewu ewu na ụwa?
Ole n’ime ihe ọkpụkpụ iri a ka ị maara n’ụwa?Na akụkụ atọ, ihe ọkpụkpụ (Ihe osise) nwere ogologo akụkọ na ọdịnala yana njigide nka mara mma. Marble, ọla kọpa, osisi na ihe ndị ọzọ bụ ndị a kpụrụ akpụ, ndị a pịrị apị, na ndị a kpụrụ akpụ iji mepụta eserese ihe ngosi na nke a na-ahụ anya nwere ohere ụfọdụ, na-egosipụta ndụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma na-ekwupụta mmetụta dị mma nke ndị na-ese ihe, Ngosipụta nka nke echiche mara mma.Mmepe nke ihe osise ihe odida Anyanwụ enwetela nnukwu ọnụ ụzọ atọ, na-egosi ihe osise zuru oke dị ka anyị si mara ya. O ruru ogo mbụ ya na Gris oge ochie na Rom. Ọnụ ọgụgụ kasị elu bụ Phidias, ebe Italian Renaissance ghọrọ nke abụọ kachasị elu. O doro anya na Michelangelo bụ ọnụ ọgụgụ kasị elu nke oge a. Na narị afọ nke 19, France bụ n'ihi Rodin's Achievement wee banye na elu nke atọ.
Mgbe Rodin gasịrị, ihe ọkpụkpụ dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ enteredwa banyere oge ọhụrụ-oge nke ihe ọkpụkpụ oge a. Ndị na-ese ihe osise na-anwa iwepụ ihe osise nke ihe ọkpụkpụ oge ochie, nakweere ụdị okwu ọhụụ, ma na-agbaso echiche ọhụrụ.
N'oge a, anyị nwere ike igosipụta ọrụ okike na ihe ịga nke ọma nke oge ọ bụla site na akụkọ ihe mere eme nke ihe osise, na ihe osise 10 a ga-amata.
Nefertiti na na
Bust nke Nefertiti bụ eserese eserese na-adịru afọ 3,300 nke ejiri nzu na plasta mee. Ihe akpụrụ akpụ bụ Nefertiti, Nnukwu Nwunye Eze nke Fero Ijipt oge ochie Akhenaten. Ekwenyere n'ozuzu ya na onye na-ese ihe bụ Thutmose dere ya na 1345 BC.
Bust nke Nefertiti aghọwo otu n'ime ihe oyiyi kachasị ama ama n'Ijipt oge ochie nwere ọtụtụ mmeputakwa. Ọ bụ kpakpando ngosi nke Berlin Museum na-ahuta ka ihe mba aesthetic egosi. A kọwara ihe oyiyi nke Nefertiti dị ka otu n'ime ọrụ nkà kachasị mma na nkà oge ochie, nke yiri nke mkpuchi nke Tutankhamun.
Ihe a kpụrụ akpụ na-egosi nwanyị nwere ogologo olu, nkuanya mara mma nke nwere ụta, agba agba dị elu, ogologo imi gị dị gịrịgịrị, na egbugbere ọnụ na-acha ọbara ọbara nke nwere ọnụ ọchị mara mma. Ọ na-eme Nefertiti ọrụ nka oge ochie. Otu n'ime ụmụ nwanyị ndị mara mma. ”
Dị ugbu a na ihe ngosi nka ọhụrụ na Museum Island na Berlin.
Chi nke mmeri na Samothrace
Chi nwanyị nke mmeri na Samothrace, ihe oyiyi mabul, 328 cm elu. Ọ bụ ọrụ mbụ nke ihe osise a ma ama nke lanarịrị oge Grik oge ochie. A na-ahụta ya dị ka akụ dị oke ọnụ ma enweghị ike nyochaa onye edemede.
Ọ bụ ihe osise siri ike na nke dị nro emere iji cheta mmeri Demetrius, onye meriri Samothrace n'ọgbọ mmiri mmiri Greek n'oge ochie, megide ụgbọ mmiri nke King Ptolemy nke Egypt. Ihe dịka 190 BC iji nabata ndị eze na ndị agha mmeri, a kpụrụ akpụrụ akpụ a n'ihu ụlọ nsọ dị na Samothrace. Ihu ikuku nke chere ihu n’elu mmiri, chi nwanyị ahụ gbasara nku ya mara mma, ka a ga-asị na ọ chọrọ ịmakụ ndị dike bịara n’akụkụ mmiri. Ebipuwo isi na ogwe aka nke ihe oyiyi ahụ, mana ahụ ya mara mma ka nwere ike ikpughe site na uwe na akwa dị mkpụmkpụ, na-enwu ike. Ihe oyiyi a dum nwere mmụọ karịrị akarị, nke gosipụtara isiokwu ya n’ụzọ zuru oke ma hapụ onyonyo a na-agaghị echefu echefu.
Louvre dị na Paris bụ otu n'ime akụ atọ dị na Louvre.
Aphrodite nke Milos
Aphrodite nke Milos, nke a makwaara dị ka Venus na Broken Arm. Achọpụtara ya dị ka ihe oyiyi kachasị mma n'etiti ụmụ nwanyị ndị Greek. Aphrodite bụ chi nke ịhụnanya na ịma mma na akụkọ ifo Greek oge ochie, yana otu n’ime chi iri na abụọ nke Olympus. Aphrodite abụghị naanị chi nwanyị nke mmekọahụ, ọ bụkwa chi nwanyị nke ịhụnanya na ịma mma n'ụwa.
Aphrodite nwere ọdịdị zuru oke na ọdịdị nke ụmụ nwanyị Greek oge ochie, na-egosipụta ịhụnanya na ịma mma nke ụmụ nwanyị, a na-ewere ya dị ka akara kachasị elu nke mma anụ ahụ nwanyị. Ọ bụ ngwakọta nke ịdị mma na ịma mma. Omume ya na asụsụ ya niile kwesiri ka edebe ma jiri Ihe nlere, mana ọ nweghị ike ịnọchite anya ịdị ọcha nke nwanyị.
Ihe ogwe aka nke Venus furu efu na nke ejiri Broken Arms wee buru ihe omimi nke nwere otutu ndi okacha amara na ndi akuko ihe omuma. Ihe ọkpụkpụ a dị ugbu a na Louvre na Paris, otu n'ime akụ atọ ahụ.
Ihe osise ọla nchara Donatello bụ "David" (ihe dị ka 1440) bụ ọrụ izizi iji weghachite ọdịnala ochie nke ihe akpụrụ akpụ.
Na ihe akpụrụ akpụ, ọnụ ọgụgụ nke Akwụkwọ Nsọ a abụghịzi akara ngosipụta, kama ọ bụ ndụ, anụ na ndụ ọbara. Iji ihe oyiyi gba ọtọ iji gosipụta ihe oyiyi okpukpe ma mesie ịma mma nke anụ ahụ ike na-egosi na ọrụ a nwere ihe dị mkpa dị mkpa.
Mgbe Eze Herọd nke Israel chịrị na narị afọ nke 10 BC, ndị Filistia wakporo. E nwere otu dike n’agha aha ya bụ Golayat, ogologo ya dị amaụkwụ asatọ, o bukwa nnukwu ekike. Damụ Israel anwa anwa ịlụ ọgụ ruo ụbọchị 40. Usen kiet, ekpri David ama aka ekese eyeneka esie emi ekedide owoekọn̄. Ọ nụrụ na Golayat dị aka ike ma na-emebi ùgwù onwe ya ya. O kwusiri ike na Eze Herọd kwetara na ihere na-eme ya ịga pụọ ​​gbuo ndị Izrel na Golayat. Herọd enweghị ike ịrịọ maka ya. Mgbe Devid pụtachara, ọ nọ na-ebigbọ ma jiri mma èbè tie Golayat isi. Ibuot oro ama ọduọ ke isọn̄, ndien David ama osio akan̄kan̄ esie owot Goliath ibuot. E gosipụtara David dị ka nwatakịrị ọzụzụ atụrụ mara mma na ihe oyiyi ahụ, yi okpu ọzụzụ atụrụ, na-ejide mma agha n'aka nri ya, ma na-azọ isi Golayat n'okpuru ụkwụ ya. Ọdịdị ihu ya dị nwayọ ma yie ka ọ dị ntakịrị mpako.
Donatello (Donatello 1386-1466) bụ ọgbọ izizi nke ndị na-ese ihe na Early Renaissance na andtali na ọpụrụiche pụtara ìhè na narị afọ nke 15. Ihe ọkpụkpụ a dị ugbu a na Bargello Gallery na Florence, Italy.
Emere ihe akpụrụ akpụ nke “David” na mmalite narị afọ nke 16. Ihe akpụrụ akpụ ahụ dị mita 3.96. Ọ bụ ọrụ nnọchiteanya nke Michelangelo, nna ukwu nke ihe osise Renaissance. A na-ahụta ya dị ka otu n'ime ụmụ nwoke kachasị nwee isi na akụkọ ihe mere eme nke Western. Ihe Michelangelo sere banyere isi Devid tụgharịrị chee ihu ihu aka ekpe tupu agha ahụ amalite, lee anya ya n’ebe ndị iro ahụ nọ, aka ekpe ya ejide èbè ya n’ubu ya, aka nri ya sekpọkasị, aka ya atapụrụ ntakịrị, ọdịdị ya dị jụụ, na-egosi otú obi dị Devid , obi ike na nkwenye nke mmeri. Dị na Florence Academy nke Ọma Arts.
Statue of Liberty (Statue Of Liberty), nke a makwaara dị ka Liberty Enlightening The World (Nnwere Onwe Inye Ihe Worldwa), bụ onyinye 100th nke France na United States na 1876. Onye Liberty a ma ama bụ onye ọkpụ France aha ya bụ Bartholdi rụchara Statue nke nnwere onwe n'ime afọ 10. Nwanyị nnwere onwe ahụ yi uwe ndị Gris oge ochie, okpueze ọ na-ekpuchite ihe atụ asaa nke kọntinent asaa na oke osimiri anọ nke ụwa.
Chi nwanyị ahụ jidere ọwa ahụ nke na-egosipụta nnwere onwe n’aka nri ya, aka ekpe ya ejidekwa “Nkwupụta nke Nnwere Onwe” nke a kanyere na July 4, 1776, n’okpuru ụkwụ ya ka akara aka, agbụ na agbụ ígwè. O gosiputara nnwere onwe ma wepu onwe ya na nsogbu nke aka ike. Emechara ya ma kpughee ya na October 28, 1886. Ihe owuwu nke ígwè a rụrụ arụ bụ nke Gustave Eiffel mere, onye mechara wuo Eiffel Tower na Paris. Ihe akpụrụ akpụ nke nnwere onwe dị mita 46, nke nwere ntọala nke 93 mita ma tụọ 225 tọn. Na 1984, e depụtara Statue of Liberty dị ka ihe nketa ọdịbendị ụwa.
Onye na-eche echiche
"Onye echiche" na-akpụzi nwoke na-arụsi ọrụ ike. Oke ukwu ahụ gbagọrọ agbagọ, gbue ikpere, aka nri ya dabere n'agba ya, jiri nwayọ na-ele ọdachi mere n'okpuru. Anya ya dị omimi na mmegharị nke iji egbugbere ọnụ ya na-egosipụta ọnọdụ dị oke mwute. Ihe ọkpụkpụ a na-agba ọtọ, nwere obere ụta dị n’úkwù. A na-etinye aka ekpe aka ekpe na ikpere aka ekpe, ụkwụ aka nri na-akwado aka nri aka nri, ewepụrụ aka nri ya na akpụrụ akpụ nke agbacha agbacha. A na-agbanye aka aka na egbugbere ọnụ. Ọ dabara adaba. N'oge a, akwara ya na-ama jijiji, na-ekpughe ahịrị zuru ezu. Ọ bụ ezie na ihe oyiyi nke ihe oyiyi ahụ ka dị, ọ dị ka ọ na-egosi na ọ na-arụ ọrụ siri ike site na nkwupụta nsọ.
"Onye echiche" bụ ihe nlere na usoro ọrụ Auguste Rodin. Ọ bụkwa ngosipụta na ngosipụta nke ọrụ anwansi ya. Ọ bụkwa ngosipụta nke owuwu ya na mwekota nke echiche nka mmadụ-Usoro echiche nka nka Rodin.
Jeff Koons (Jeff Koons) bụ ama ama ama ama ama ama n’America. Na 2013, nkịta balloon ya (oroma) bụ nke igwe anaghị acha nchara, Christie nwere ike ịdekọ ọnụahịa nke $ 58.4. Koons mekwara nsụgharị ndị ọzọ na-acha anụnụ anụnụ, magenta, ọbara ọbara na odo.
Ọrụ a ma ama bụ "Ududo" nke Luis Bourgeois karịrị 30 mita n'ogologo. Ihe dikwa nma bu na ududo ududo bu nne nne ya, bu onye na-emezi kapeeti. Ugbu a, ihe osise ududo anyị na-ahụ, nke yiri ka ọ na-emebi emebi, ogologo ụkwụ, jiri obi ike chebe nsen marble 26, dị ka a ga - asị na ha ga-ada ozugbo, mana ọ kpalitere egwu nke ọha na eze, ududo bụ ọdịdị ha ugboro ugboro Isiokwu ahụ gụnyere ududo ududo 1996. Ihe ọkpụkpụ a dị na Guggenheim Museum na Bilbao. Luis Bourgeois kwuru otu oge: Okenye nke onye ahụ, mara ihe.
Onye kere ndị agha Terracotta na ịnyịnya nke Qin Shihuang? A na-eme atụmatụ na enweghị azịza, mana mmetụta ya na ọgbọ ndị na-esote ọhụụ na-adị taa wee ghọọ usoro ejiji.